Vadzidzisi veMuzvikoro zvePamusoro Voramwawo Mabasa
Chikumi 30, 2011
Sangano rinomiririra varairidzi vemuzvikoro zvepamusoro zvehurumende, reCollege Lecturers Association of Zimbabwe, rinoti nhengo dzaro dzapindawo mukuramwa mabasa dzichida kuwedzerwa mari dzemihoro.
Mutungamiri wesangano iri, VaDavid Dzatsunga, vanoti nhengo dzavo, idzo dziri kutambira mari dziri pakati pemazana maviri nemazana maviri nemakumi mashanu emadhora pamwedzi, dziri kuda mihoro iri pamusoro pePoverty Datum Line, iyo yava pamadhora mazana mashanu nemaviri.
Sangano reColleges Association of Zimbabwe rinoti rine nhengo chiuru nemazana mashanu. Nhengo dzesangano iri dziri kubatana nenhengo dzesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, idzo dziri kuramwawo mabasa dzichida kuti mari dzemihoro dziwedzerwe.
Asi nhengo dzeZimbabwe Teachers Association dzinoti dziri kuenda kumabasa dzakamirira kuona kuti hurukuro dzemihoro, idzo dziri kutarisirwa neChishanu pakati peApex Council nehurumende, dzinopera seyi.
Zvichakadaro, sangano rePTUZ rinoti sachigaro waro kuMashonaland Central, VaProsper Mugwagwa, avo vanodzidzisa paNzvimbo Secondary School mudunhu reMazowe, yaburitsirwa pfuti nemukuru wepachikoro ichi, VaDiamond Zharare, mushure mekunetsana pamusoro pekuramwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi raVaZharare panyaya iyi.
Asi VaMugwagwa vaudza Studio7 kuti vamhang’ara nyaya iyi pamapurisa epaChombira pamwe nekumahofisi avo ebasa, vakatiwo izvi hazvisi kuzovadzosera kumashure muhondo yavo yemihoro.